Amino Acids, L-Cystine, L-Cysteine ​​- Boyu
Hebei Boyu Biotechnology CO., Ltd. iri muXinle Industrial Park, Hebei Province, iyo fekitori sosi yezvigadzirwa zveamino acids.
Zvigadzirwa zvikuru: L-Cystine, L-Cysteine, L-Cysteine ​​HCL Monohydrate / Anhydrous, N-Acetyl-L-Cysteine, S-Carboxymethyl-L-Cysteine, L-Leucine, N-Acetyl-L-Leucine, N- Acetyl-DL-Leucine, L-Tyrosine, N-Acetyl-L-Tyrosine, N-Acetyl-thiazolidine-4-carboxylic acid (Folcisteine) (CAS NO.: 5025-82-1), L-Argine, L-Arginine HCL, L-LysineHCL, Glycine uye Mvura-inogadziriswa Amino Acid Fertilizer ect. inoshandiswa zvakanyanya muminda yemishonga, chikafu, zvigadzirwa zvehutano, chikafu uye mafetiraiza.
Yakapfuura ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, HALAL certification.
Iyo kambani yakavambwa munaGunyana 8, 2015 uye ikaiswa mukushanda muna Chikunguru 13, 2016.Iye yemazuva ano yepamusorosoro bhizinesi rakavakirwa paR & D uye rinotungamirwa nekusimudzira budiriro.
212021 / Chikumi
Nhoroondo yeamino acids
1. Kuwanikwa kweamino acids Kuwanikwa kweamino acids kwakatanga muFrance muna1806, apo vemakemikari Louis Nicolas Vauquelin naPierre Jean Robiquet vakaparadzanisa mukomboni kubva kune asparagus (yakazozivikanwa seAsparagine), yekutanga amino acid yakawanikwa. Uye kuwanikwa uku kwakamutsa scie ...
Basa reamino acids
1.Kudyiwa nekudyiwa kweprotein mumuviri kunoitwa kuburikidza nemaamino acids: sechinhu chekutanga chinovaka muviri mumuviri, protein ine basa rakajeka mukudya kwekudya, asi haigone kushandiswa zvakananga mumuviri. Iyo inoshandiswa nekushanduka kuita madiki amino acid mamorekuru. 2.play iro basa o ...
Amino Acids Tangisa
Chii chinonzi amino acids? Amino acids ndizvo zvinhu zvekutanga zvinoumba mapuroteni, uye ari makemikari makemikari umo maatomu ehydrogen paacarbon maatomu e carboxylic acids anotsiviwa nemapoka eamino. Amino acids inogona kugadzira mapuroteni epanyama, pamwe neamine-zvine zvinhu zvakadai ...